နောက်ဆုံးပို့စကဒ် | Skip to content
ပုံနှိပ်မီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာ အားပြိုင်ဆွေးနွေးပွဲ (ပထမပိုင်း) →
Posted on July 24, 2012 by mamyathway	Number of View: 2889
ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတို့က တစ်လှမ်းနဲ့ တစ်လှမ်းအကြား စိတ်စိတ်လှမ်းနေလို့။ ဖြစ်နိုင်လျှင် လမ်းမလျှောက်ပဲ ပြေးလို့တောင် သွားလိုက်ချင် နေမိသေးတယ်။ ခြေလှမ်းတွေက အိမ်ဘက်ကို အမြန်ဦးတည်နေရင်းကပဲ အတွေးတွေက တစ်သီတစ်တန်းကြီးနဲ့ တွေးနေမိသေးတာ။
“ ဘာလို့များ ဒီခရီးကို ငါ သွားခဲ့မိတာပါလိမ့်၊ ငါမရှိချိန် အမေတစ်ယောက် ဘယ်လိုများ နေနေပါလိမ့်၊ အိမ်အကူ အဒေါ်ကြီးကရော အမေ့ကို ငါ့လိုမှ ဂရုစိုက်ပါ့မလား၊ အမေသောက်ရမယ့် ဆေးတွေ မှန်မှန်မှ သောက်ရဲ့လား၊ ငါမရှိတဲ့ ခြောက်လလုံးလုံး အမေဘယ်လိုများ နေနေပါလိမ့်..”
ကျွန်တော့်ဘ၀နဲ့ထပ်တူ တန်ဘိုးထားခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူက ကျွန်တော့ကို စွန့်ခွာလို့ ဘ၀တစ်ခု ထူထောင်လိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ ဆောက်တည်ရာ မရခဲ့ပါဘူး။ မျက်စိနှစ်လုံး တိမ်ကွယ်နေရှာတဲ့ မုဆိုးမ မိခင်အိုကို စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကျွန်တော့်လို လခစား ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို စွန့်လို့ နိုင်ငံခြားပြန် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်သွားလေတဲ့ ချစ်သူရဲ့ စွန့်ပစ်မှုက ရင်ကို တကယ့်ကိုကြေမွစေခဲ့ပါတယ်။ အမေ့ကို အဒေါ်ကြီးနဲ့ထားလို့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးအရှည်ကြီး ထွက်ရမယ်လို့ အမေစိတ်မပူအောင် မုသားသုံးပြောကာ သူငယ်ချင်းရှိရာ ရှမ်းပြည်ဘက်ကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခရီးထွက်ခဲ့မိတော့တယ်။
ခရီးမထွက်ခင် အမေ့ကို စိတ်မပူဖို့မှာ၊ အဒေါ်ကြီးကိုလည်း သေချာ စောင့်ရှောက်ဖို့မှာ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ အပ်နှံလို့ အက်ကွဲနေတဲ့ အသည်းဒဏ်ရာကို ကုစားဖို့ ဒီခရီးကို ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တာ။ ခဏဆို နေလိုက်တာ ချေးကျရာ ပျော်တတ်တဲ့ကျွန်တော်၊ သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီး သူ့ရဲ့ မက်မန်းခြံလုပ်ငန်းထဲ စိတ်ပါမိပြီး တော်တော်နဲ့ မပြန်ဖြစ်တော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့အလုပ်မှာ နေရာတစ်နေရာ ပေးလေတော့ အဆင်ပြေနေလိုက်တာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀င်ငွေလေးတွေတောင် အမေ့အတွက် အိမ်ရဲ့ တစ်ဖက်ခြံက နုနုကနေတဆင့် မှန်မှန်လွှဲပို့ပေးနေနိုင်ပြီ။ အမေ့ကိုလည်း မကြာမကြာ စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ နုနုကို အကူအညီ တောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရှမ်းပြည်မှာ ဇာတ်မြုပ်နေလိုက်တာ အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ၆လနီးပါးလောက် ရှိလာခဲ့တယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ အမေက ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်လို့ ရုတ်တရက် ဆုံးရှာလေတယ်။ မိခင်မရှိတော့ရှာတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ သောကဗျာပါဒကို ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်မှုနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ရန်ကုန်မှာထားခဲ့မိတဲ့ အမေ့ကို နင့်နင့်သည်းသည်း သတိရလာမိတယ်။ ဒါနဲ့ ရက်လည်ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း တစ်စက္ကန့်မျှတောင် အချိန်မဆွဲနိုင်တော့ဘဲ ရန်ကုန်က အမေရှိရာကို ရုတ်တရက် အပြေး ပြန်လာမိခဲ့ပါတော့တယ်။ ခြောက်လလုံးလုံး စာမရေး၊ ဖုန်းလေးနဲ့တောင် စကားမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ သားကို အမေက တွေ့တွေ့ချင်း အပြစ်တင်မယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ဝကြီးကို ခေါင်းငုံ့ခံယူဖို့ ကျွန်တော် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ခြံတခါးကို တွန်းဖွင့်ဝင်လိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုကို ရလိုက်မိပါတယ်။ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတွေ ရှိနေတဲ့ ဒီအိမ်ရိပ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ အမေ့အပေါ် လွမ်းဆွတ်နေမှုကို ပိုိုလို့ တိုးလာစေပါတော့တယ်။ အိမ်ပေါ်ရောက်လို့ အမေ့ကို တွေ့တွေ့ချင်း ထွေးဖက် ငိုလိုက်မိတော့ အမေက ကျွန်တော့်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဖွဖွညင်သာ ပွတ်သတ်လို့။
အမေ့ရဲ့ အမြင်ချို့တဲ့နေရှာတဲ့ မျက်စိနှစ်ကွင်းမှာ မျက်ရည်ကြည်များ ရုတ်ချည်း အိုင်ထွန်းလို့လာတယ်။ အမေက တအံ့တသြနဲ့ “ငါ့သား ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ပြန်လာပါရော့လား..” တဲ့။ “အလုပ်တွေ တိုးချဲ့ရမှာမို့ ပြန်လာဖို့ မဖြစ်သေးဘူးဆို..”တဲ့။ အမေ့ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ စကားတွေကြောင့် ကျွန်တော် ကြောင်အသွားတယ်။ ခြောက်လလုံးလုံး စာတစ်စောင်မျှ မပို့၊ ဖုန်းတစ်ခါမျှ မဆက်သွယ်ခဲ့တာ။ အမေက ဒီလိုဘာကြောင့် ပြောရပါလိမ့်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇဝေဇ၀ါအတွေးတွေက ထမင်းစားခန်းထဲ ရောက်ချိန်မှာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဖြေပေါ်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။
အမေက ကျင့်သားရနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထမင်းစားခန်းနဘေးက စင်လေးပေါ်ကို စမ်းတစ်ဝါးဝါးနဲ့ရှာရင်း လှမ်းယူလိုက်တော့ အမေ့လက်ထဲမှာ ကဒ်ထူပြားအထပ်လိုက်လေးတွေ အရေအတွက်နှစ်ဆယ်လာက် ထည့်ထားတဲ့ ဗူးလေးတစ်ခု။
“ ဒါ.. သားပို့ ပေးထားတဲ့ ပို့စကဒ်လေးတွေလေ၊ အမေသိမ်းထားတာ၊ နုနုက စာတိုက်မှာ လုပ်တယ်ဆိုတော့ အမေ့ဆီ သားပို့ပို့ပေးတဲ့ ပို့စ်စကဒ်လေးတွေ ယူယူလာပြီး ဖတ်ပြရှာတယ်လေ၊ ဒီကဒ်လေးတွေကနေ ငါ့သားရဲ့ သတင်းအခြေအနေတွေ အသေးစိတ် အမေအကုန် သိနေရတာပေါ့၊ ငါ့သားလေး.. အမေ့ကို အလုပ်တွေ တစ်ဖက်နဲ့ အခုလို မမေ့မလျှော့ရှိနေတာ သိရတော့ အမေ့မှာ ၀မ်းသာမဆုံးဘူး၊ အမေ့သားလေး ဘေးမသီရန်မခဖို့ အမြဲ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ပေးနေတယ်၊ သားကို သတိရတိုင်း နုနုကို ဒီကဒ်လေးတွေက အမေ့သားရေးထားတဲ့ စာလေးတွေ ပြန်ဖတ်ဖတ်ခိုင်းရတယ် ”
အမေ့စကားနားထောင်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာတယ်။ အမေ့လက်ထဲက ပို့စကဒ်မဟုတ်တဲ့၊ စာတစ်လုံးသော်မျှ မရေးထားတဲ့၊ နုနုရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ပို့စကဒ်ဆိုတဲ့ ဘာဆိုဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကဒ်ထူပြားလေးကို ကြည့်နေရင်း ရင်ထဲ ရုတ်ချည်း ဆို့နင့်လို့ ကြေကွဲလာမိတော့တယ်။ ငယ်ငယ်က ဆေးထိုးမှားလို့ လမ်းလျှောက်ရင် ခြေထောက်လေး တစ်ဘက် ဆာနေရှာရတဲ့ တဖက်ခြံက နုနု၊ အမေ့အတွက် ကျွန်တော်လွှဲပေးနေတဲ့ ငွေတွေကို ထုတ်ယူပြီး အမေ့ကို ပို့ပေးနေရှာတဲ့ နုနုကို ကျွန်တော် မြင်ယောင်လာမိတယ်။
စာတစ်လုံးမှ မဖတ်နိုင်ရှာတဲ့၊ မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းမရရှာတဲ့၊ သားနဲ့ဝေးနေရတဲ့ အမယ်အိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ သားအပေါ် လွမ်းဆွတ် ဝေ ဒနာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကြိုးစားနှစ်သိမ့်မှု ပေးနေရှာတဲ့ နုနုရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စေတနာက သူ့လို သားမျိုးအတွက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထိုးနှက်ခြင်း ခံလိုက်ရပါပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ….
“ အဖွားရေ… အဖွားသားဆီက ပို့စ်စကဒ်လေး တစ်ခု ထပ်ရလာပြန်ပြီ၊ ဖတ်ကြရအောင်နော်.. ” ဆိုပြီး ခြေထောက်လေးဆာတာဆာတာ ထောက်ပြီး လှမ်းလို့ အိမ်ထဲကို နုနုဝင်လာပါတယ်။ အမေ့မျက်နှာက ပြုံးရွှင်ဝင်းလက် သွားလျှက်က …
“ အမေ့သားလည်း ပြန်ရောက်နေတယ် နုနုရေ၊ လူရော.. ပို့စကဒ်ရော တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ရောက်လာတာပါလား ” လို့ ၀မ်းသာစွာ ပြောလေတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်တော့ နုနုက အံ့သြသင့်သွားပေမယ့်…
“ ရှင်က အမေ့ကို သိပ်ချစ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ပဲနော်၊ ခရီးသွားနေတာတောင် စာတွေ အဆက်မပြတ် ပို့ပေးနိုင်တယ်…၊ အမေကြီးမှာ ဒီလိုသား မျိုးရတာ သိပ်ကံကောင်းတာပဲနော်”
နုနုနှုတ်က ထွက်လာတဲ့ စကားလုံးတွေက ကျွန်တော့်ရင်ကို ဓါးနဲ့ နုတ်နုတ် မွှမ်းနေသလိုပါဘဲ။ မိဘတွေဆီ ငွေကြေးတွေမှန်မှန် ပို့ပေးနေယုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ငွေကြေးထက် အရေးကြီးတဲ့ ဘယ်လိုအရာတွေကို မိဘတိုင်းက သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေဆီကနေ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ နုနုရဲ့ ကဒ်ထူပြားလေးတွေဆီကနေ ကျွန်တော် သိခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ နုနုကို ကျွန်တော်က နှုတ်ခမ်းအနားမှာ လက်ညှိုးနဲ့ ပိတ်သလို လုပ်ပြလျှက်က….
“ နုနုယူလာတာ ကျွန်တော်နောက်ဆုံး အိမ်မပြန်ခင်က ပို့လိုက်တဲ့ ပို့စကဒ် ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပေး..ပေး.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ အမေ့ကို အခု ဖတ်ပြလိုက်ပါ့မယ်၊ အမေရော နုနုရော သေချာနားထောင် ပေးပါနော်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမေ့ဆီ နောက်ဆုံးပို့တဲ့ ဒီပို့စကဒ်လေးကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဖတ်ပြချင်မိလို့ပါ ”
ကျွန်တော်ရဲ့ မုသားစကားအတွက် နုနုတစ်ယောက် ခွင့်မလွှတ်ရင်လဲ နေပါတော့။ အမေ့နဘေးမှာ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်တစ်ဖက်က အမေ့ရဲ့ အရေပြားတွန့်တွေ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ လက်ကလေးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုတ်ကိုင်ယူလိုက်ပြီး၊ ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်က ဖန်တီးထားတဲ့ ပို့စကဒ်လို့ဆိုတဲ့ ဘာဆိုဘာမှ ရေးထားခြင်းမရှိတဲ့ ကဒ်ပြားလေးကို ကိုင်လို့ အခုလို ပြောလိုက်တယ်။
“ အမေ…. အမေ့ကို ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်၊ အမေ့ကို ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပဲ ထားခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ နောက်ထပ် မရှိစေရတော့ပါဘူး၊ ကျွန်တော် အမေနဲ့အတူ မခွဲမခွာနေသွားမယ်ဆိုတာ အမေ့ကို ဂတိပေးပါတယ် ”
ကျွန်တော်အသံတွေ တုန်ရီကောင်း တုန်ရီနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် စကားအဆုံးမှာတော့ အမေနဲ့ နုနုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က ကြည်နူးပီတိဆေးမှင်နဲ့ ရေးခြယ်ထားတဲ့ ဖြူစင်မေတ္တာစာတွေကိုတော့ ကျွန်တော် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ဖတ်ရှုခွင့် ရရှိလိုက်ပါတော့တယ်။
( ၀န်ခံချက် – လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀လောက်က ဖတ်ထားဖူးခဲ့တဲ့ အမည် မမှတ်မိတော့သည့် ဘာသာပြန် ၀တ္တုလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်ကျောရိုးယူ၍ ခံစားရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
This entry was posted in ၀တ္ထု. Bookmark the permalink.	← အလွမ်းမပြေအလွမ်းဝေ
26 Responses to နောက်ဆုံးပို့စကဒ်
Kay says:	July 24, 2012 at 12:50 pm	Really good story, like it .thank you.
Reply	Kay says:	July 24, 2012 at 12:51 pm	Really good story.
Reply	နေခြည်သစ်နွယ်(ပြည်) says:	July 24, 2012 at 1:01 pm	မမရေ
ဒီတခါတော့ နေခြည်လေးက ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ခွင့်ရတာ ပထမဆုံးပဲနော်
အရင်က အလည်သွားရတဲ့ဆိုဒ်တွေကအများကြီးဆိုတော့ တနေ့တနေ့ စာတွေကဖတ်မနိုင်ဘူးလေ
ခုတော့ နေခြည်လေးရဲ့ဆိုဒ်ထဲမှာ feedbackလေးတခုကို လုပ်ထားမိတော့ ပို့စ်အသစ်တွေတင်တိုင်း ချက်ချင်းဖတ်လို့ရပြီပေါ့ ထူးထူးသွားစရာမလိုတော့ဘူးလေ
Reply	ထရီဆာ (Teresa) says:	July 24, 2012 at 1:53 pm	မျက်စိထဲမှာတောင် မြင်မိပါတယ် ဆရာမ မြသွေးနီ …..းး))
Reply	ကူးကူးလှိုင် says:	July 24, 2012 at 4:12 pm	လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ပို့စ်ကောင်းလေးပဲနော် သတိတရားလေးတွေ မေ့နေရင်တောင် သတိထားဖြစ်မဲ့ပို့စ်လေး အရမ်းကိုကြိုက်ပါတယ်…
Reply	မိုးညချမ်း says:	July 24, 2012 at 4:20 pm	ဖတ်ပြီးတော့ ခံစားချက်လေးတစ်မျိုး ခံစားလိုက်ရတယ် မမ … ကြည်နူးခြင်းပီတိတွေထင်ပါရဲ့ … Reply	angelhlaing says:	July 24, 2012 at 4:35 pm	ရင်သို့ ထိမှန်စေသော ရသလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲမမရေ..
Reply	လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် says:	July 24, 2012 at 4:37 pm	ခံစားလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးပါပဲ ဆရာမ ။
Reply	လရိပ်အိမ် says:	July 24, 2012 at 4:54 pm	ရင်ထဲမှာ နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားမိသွားတယ်
Reply	ဘုန်းဘုန်းတောက် says:	July 24, 2012 at 6:07 pm	မရှိတော့တဲ့အမေကိုတောင် သတိရသွားပြီ ဆရာမမြသွေးနီရေ…
Reply	ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) says:	July 24, 2012 at 6:34 pm	နုနုနဲ့ အကြောင်းပါသွားမယ် ထင်နေတာ။
ပါကောင်း ပါသွားနိုင်တယ်နော် အမ။
Reply	အန်တီတင့် says:	July 24, 2012 at 8:25 pm	ဇာတ်လမ်းလေးက ဆွဲဆောင်အားကောင်းတယ် မြသွေးရေ။
Reply	ညီလင်းသစ် says:	July 24, 2012 at 10:13 pm	ဟုတ်တယ်နော်..၊ မိဘကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ ရုံနဲ့ သားသမီး တာဝန်ကျေပြီလို့ မယူဆသင့်ဘူး ဆိုတာ ဒီဝတ္ထုလေးက မီးမောင်းထိုးပြ လိုက်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်က ခြေထောက်လေး ဆာနေပေမယ့် သူတပါးရဲ့ နှလုံးသားကို တည့်မတ်စေတဲ့ နုနုဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေးရဲ့ လုပ်ရပ်ကလည်း လေးစားစရာ ပါပဲဗျာ…။
Reply	Maribel says:	July 25, 2012 at 12:12 am	Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog
Reply	ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) says:	July 25, 2012 at 12:42 am	ခုခေတ်တော့ စာတွေ ပို့စကဒ်တွေ မပို့တော့ဘဲ ဖုန်းဆက်ကြတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ မိဘတွေဆီ ဖုန်းနဲ့ဘဲ မကြာခဏ ပြောဖြစ်တယ်။
အစ်မ ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ့ဆီ စာမရေးတာ ကြာလို့ လူကြုံနဲ့ အမေမှာခဲ့တဲ့ စကားလေး ပြန်သတိရမိတယ်။
မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာကတော့ ဘယ်တော့မှ မကုန်ခမ်းနိုင်အောင်ပါဘဲ။
သားသမီးတွေကလည်း ဘယ်လောက်ဝေးဝေး မိဘကို မမေ့မလျော့ သတိတရ ရှိသင့်တယ်နော်။
Reply	သိ င်္ဂါရ says:	July 25, 2012 at 5:51 pm	ဟုတ်တယ် … အမေ့အတွက် … လို့ စဉ်းစားဖြစ်တဲ့ အထဲမှာ အဲလို ကိစ္စတွေကို မေ့နေမိတယ် ။ အစ်မ မြသွေးနီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။ တကယ်ပဲ စဉ်းစားဖြစ်ဖို့ လိုနေတဲ့ အတွေးတွေ ရတယ် …
Reply	ရွှေပြည်သူ says:	July 25, 2012 at 11:03 pm	ခုတလော စိတ်သောကကြုံပြီး မိဘကျေးဇူးတွေကို မကြာခဏ တွေးနေမိတုန်း ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ် အစ်မမြသွေးနီ… အနှစ်သာရ ရှိတဲ့စာအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	sosegado says:	July 26, 2012 at 8:52 am	ဖတ်ပြီး နုနုကို ချီးကျူးမိပါသည်၊ အမေအို တစ်ယောက်ကို စာနာ နားလည်းနိုင်မှုပေးနိုင်လို့ပါပဲ၊
Reply	စံ့ယ်ချို says:	July 26, 2012 at 2:17 pm	မေမေတစ်ယောက်ထဲရှိနေတဲ့သူဆိုတော့ပိုပြီးခံစားရတယ်အမရေ
ဖတ်ပြီးမေမေကိုပဲ မျက်စိထဲမြင်နေတော့တာပဲ ဖုန်းလဲ ဆက်မိသေးတယ်
စိတ်ပူလာသလိုလဲ ဖြစ်မိတယ် လွမ်းလဲလွမ်းတယ်
Reply	အပါ says:	July 26, 2012 at 6:59 pm	ရင်ကိုထိသွားတာပဲ အစ်မရေ…
Reply	ပန်းချီ says:	July 27, 2012 at 6:45 am	တစ်လကြာလို့မှ ဖုန်းတစ်ချက်မခေါ်မိတဲ့အခါ အမေက အငေါ်တူးတတ်တာလေး သတိရသွားမိတယ် မမမြသွေးရေ.. ပို့စ်ထဲက လူသုံးဦးရဲ့ မေတ္တာက အပြင်ကလူရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲအထိ စီးဆင်းလာပါရောလား ….
Reply	Latt Latt says:	July 27, 2012 at 3:39 pm	ကောင်းလိုက်တာ…
Reply	နွေလ says:	July 27, 2012 at 3:54 pm	မိဘတွေအတွေက်တော့ ငွေကြေးထက်
နွေးထွေးတဲ့ စကားလေးတစ်လုံးကို လိုအပ်ပါတယ် တဲ့
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်လေးထဲကပါ
နွေးထွေးတဲ့ စာလုံးလေးတွေကို ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ် လို့
Reply	ညီရဲ says:	July 28, 2012 at 9:06 am	အဝေးရောက် သားတစ်ယောက်ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သလို ပါဘဲ အစ်မရယ်… ကျေးဇူးပါ…
Reply	ဆူးသစ် says:	July 31, 2012 at 9:07 pm	ကျွန်တော်ကတော့ အမေ့ကိုရော၊ အဖေ့ကိုပါ သတိရတိုင်းဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာလေးတွေလုပ်ပေးရင်းကပဲ အဝေးကနေ အဲဒီမိဘတွေရဲ့ အသံကို ကြားခွင့်ရှိနေသေးတဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေသေးလို့ပါ။ အမှန်ကတော့ မိဘကို ငွေကြေးနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနားမှာ ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုပြီး နေချင်တာပါ။ လောလောဆယ်တော့ မတတ်နိုင်သေးလို့ အဝေးမှာပဲ နေနေရတုန်းပါ အစ်မရေ။ ကျွန်တော်တို့လို သားတွေအတွက် အစ်မရဲ့ပို့စ်က တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါ။ လေးစားကျေးဇူးတင်လျှက်……….
Reply	blackroze says:	August 1, 2012 at 1:12 am	မကြီးမြသွေးရေ
သူတို့အမြင် …ဆွေလေးမွန် on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားဦးအောင်မြင့် on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားSuon won on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားအန်တီတင့် on PEN Myanmar ဆိုတာ…ကူးကူးလှိုင် on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားအများဆုံးဖတ်တဲ့ပို့စ်အကျွမ်းတ၀င်ရှိသောသူစိမ်းများ - 23951 hitsသမီးရဲ့မျက်လုံးလေး - 22303 hitsအိမ်မက်ကောက်ကြောင်း - 19107 hitsလပ်ကီးနဲ့ မီးညောင် (၂) - 17854 hitsခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေလို့ - 17560 hitsတစ်လချင်းစီ ရေးခဲ့တာတွေ…	Select Month December 2013 (1)